Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-02-28 19:31:52
ဧရိယာစတုရန်းမိုင်ပေါင်း( ၂၆၁၂၂၈ )စတုရန်းမိုင်ကျယ်ဝန်းပါတယ်ဆိုတဲ့မြန်မာပြည်မှာ
နှစ်ပေါင်း၄၀ကျော် သူအိမ်သူ့ရာမှာနေထိုင်တဲ့အဘွားအို ကကျူးးကျော်တဲ့လားဗျာ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဧရာဝတီတိုင်း ဟင်္သာတမြို့ခရီးစဉ်၌ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သူ အလွန်များပြ…
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဧရာဝတီတိုင်း ဟင်္သာတမြို့ခရီးစဉ်၌ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သူ အလွန်များပြားခဲ့ပြီး ဟင်္သာတမြို့ ဟောပြောပွဲသို့ တက်ရောက်သူ သောင်းချီ ရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ရက်က ဧရာဝတီတိုင်း…
မတ်လ ၁ ရက်ပြန်စမယ့် ကျောင်းသားသပိတ်ရပ်တန့်ဖို့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက သတိပေးလိုက်ပြီး မလိုက်နာရင် တည်ဆဲဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူမယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။[…] The post ကျောင်းသားသပိတ်ရပ်တန့်ရန် ပြည်ထဲရေး သတိပေး…
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-02-28 04:47:48
Freelance Photographer Detained in Myanmar over Facebook Postwww.irrawaddy.orgLocal authorities in Monywa detainafreelance photographer after he postedasatirical photo on Facebook mocking authorities.
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-02-28 04:11:57
အောင်နေမျိုးကို ” ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အရေးပေါ်စီမံမှုအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅(က)/ (င) ” ဖြင့် ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထား
အောင်နေမျိုးကို ယနေ့ ညနေ ၅း၃၀ နာရီ၊ မုံရွာထောင်တွင် မိသားစုနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် မုံရွာမြို့နယ် ရဲစခန်းမှူးက ပုဒ်မ ၅၀၅ ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည် ဟု ဆိုခဲ့သော်လည်း အောင်နေမျိုး၏ မိသားစုမှ ရဲစခန်းသို့ ယခုည ပြန်လည်ဖုန်းဆက် မေးမြန်းရာ ” ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အရေးပေါ်စီမံမှုအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅(က)/ (င) ” ဖြင့် ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထားကြောင်း ပြန်လည်သိရပါသည်။
အောင်နေမျိုးကို ” ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အရေးပေါ်စီမံမှုအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅(က)/ (င) ” ဖြင့် ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထားကြောင်း မှန်ကန်ပါသည်။
တနင်္လာနေ့တွင် ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ရမည်ဟုလည်း သိရသည်။
(ဓာတ်ပုံ မှာ ကျွန်တော်နှင့် အောင်နေမျိုး ပုဂံမြို့သစ်မှာ ဓာတ်ပုံ အတူ ရိုက်ခဲ့ကြစဉ်က ….)
“မြန်မာပြည် စစ်အစိုးရ လုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေ၊ မလုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေ ဘာမှလုပ်လို့ မရတော့ဘ…
“မြန်မာပြည် စစ်အစိုးရ လုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေ၊ မလုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေ ဘာမှလုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ ဒီခရိုနီ တစ္ဆေကို သူမွေးခဲ့တာ။ သူအာဏာရှိတုန်းက မွေးခဲ့တာ။ ခင်ဗျားဆိုလည်း ဒါပဲလုပ်မှာပဲ။ ကျုပ်လည်း ဒါပဲလုပ်မှာပဲ”စွယ်စုံရအနုပညာရှင်…
via MoeMaKa Burmese News http://ift.tt/17E5SXz http://ift.tt/1pyw0ag
သိမ်းဆည်းခံလယ်ယာမြေများ ပြန်လည်ရှိရေးအတွက် ဦးဆောင်တောင်းဆိုဆန္ဒပြ၍ ပုဒ်မ ၁၈ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံရပြီး ဖားအံအကျဉ်းထောင်တွင် အကျဉ်းကျခံခဲ့ရသည့် ၈၈မျိုးဆက်ကရင်ကျောင်းသားများ အစည်းအရုံးမှ အဖွဲ့ဝင် ၄ဦးမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ရက်နေ့က ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။…
မိကျောင်းကန် သပိတ်စခန်းဖျက်သိမ်းပြီး ၁၄ ဦးကို ဖမ်းဆီး
မိမိမြေပြန်လည်ရရှိရေး ၁၁လကြာ သပိတ်စခန်းဖွင့် တိုက်ပွဲဝင်နေသည့် မိကျောင်းကန်ဒေသခံ ၁၈ဦးကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ရက်က နံနက် ၃နာရီဝန်းကျင်က ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး သပိတ်စခန်းကိုလည်း စည်ပင်ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ via…
‘ ဝ ‘ ၊ မိုင်းလားနှင့် RCSS တို့အား တစ်နေ့ တိုက်ခိုက်ရမည်ဟု တြိဂံ တိုင်းမှူး ပြော
သျှမ်းပြည် အရှေ့ပိုင်း ကျိုင်းတုံမြို့ အရှေ့ဘက် ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ကျော်ရှိ မိုင်းယန်းမြို့တွင် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၅ ရက်နေ့က ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် တြိဂံတိုင်း…
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-02-27 17:46:01
ကျောက်ဆည်မြို့တွင် ကျောင်းသားသပိတ်ထောက်ခံပွဲကို ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအနက်မှ ၁။ကိုနိုင်ရဲဝေ ၂။မငြိမ်းငြိမ်းထွေး ၃။ကိုရဲရင့်ပိုင်မှူး ၄။ကိုကောင်းဇော်ဟိန်း ၅။ကိုအောင်မင်းခန့် တို့ ၅ဦးကို ကျောက်ဆည်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးခင်မောင်သန်းက ကျောက်ဆည်ရဲစခန်းမှာ ပုဒ်မ၁၈,၁၄၃, ၅၀၆,၁၁၄ တို့ဖြင့် တရားစွဲထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာ လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေူပွဲမူဘောင် ၉ ချက်အနက် ၁ ချက်ကို ချိုးဖောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2015-02-27 17:30:29
မုံရွာမြို့က နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်ကိုအောင်နေမျိုးကို ဖမ်းဆီး
27-02-2015 — with Pan Ye Lan and 22 others.
မိကျောင်းကန်သပိတ်စခန်းကို စည်ပင်ရဲ ဖြိုခွင်း
ရန်ကုန်မြို့ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းမှာရှိတဲ့ မိကျောင်းကန်သပိတ်စခန်းကို စည်ပင်ရဲတွေက ၀င်ရောက် ဖြိုခွင်းရှင်းလင်းခဲ့ပြီး လူ ၁၈ ဦးကို ဖမ်းဆီးထားလိုက်ပါတယ်။[…] The post မိကျောင်းကန်သပိတ်စခန်းကို စည်ပင်ရဲ ဖြိုခွင်း…